Ogaden News Agency (ONA) – Dawo Sawirada iyo Warbixin Wacdarihi Kadhacay Nebraska iyo Sanadguradii JWXO ee 30 aad.
Dawo Sawirada iyo Warbixin Wacdarihi Kadhacay Nebraska iyo Sanadguradii JWXO ee 30 aad.
Posted by ONA Admin	/ August 19, 2014
Maalintii Sabtida ahay 16 Aug 2014 Waxaa ay munaasabad baladhan oo lagu xusayay Sanadguradii 30 ee ka soo wareegtay aas aaskii JWXO lagu qabtay Magalada Grand Island ee gobolka Nebraska ee wadanka Marakanka. Munaasabadan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay oo si heer sarah Aah u soo agasimay Jaliyada Ogadenya gobolka Nebraska.
Munaasabadan oo ahay mid tarikhi ah ayaa waxaa isugu yimid madhasha daad aad u tirabadan oo ka kala yimid dhamaanba magalooyinka ka tirksan gobolka Nebraska, iyo waliba wufuud ka kala timid gobolada Minnesota iyo Denver Colorado.
Munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay oo khudbado dhiiga dhaqajinaya ka soo jeediyay masuliyiin ka tirsan JWXO iyo siyaasiyiin, ganacsato iyo aqqonyahamiin bulshada Somaliyeed magac dheer iyo muunad ku leh iyo waliba siyasiyiin ka soo jeeda qowmiyadaha dulman ee ku hoos nool gumaysiga Ethiopia.
Qowmiyadihii madasha ka sooqayb galay munasabadan ayaa waxay kala ahayeen.
1- Qowmiyada Oromada.
2- Qowmiyada Gambella.
3- Qowmiyada Ciisaha
4- Qowmiyada Binishingulka
5- Qowmiyada Canfarta.
6- Qowmiyada Somalida Ogadenya.
7- Jamhuriyada Somaliyeed.
Munaasabadan ayaa ahayd mid tarikhi ah oo aan horay gobolka Nebraska aan uga dhicin tarikhda halganka Ogadenyana baal dahaba ka gashay.
Waxaa xusid mudan bandhig fanedkii ay soo bandhigeen ururka Midowga Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenya (OYSU) oo runtii ahaa bandhig faneed tayo aad u saraysa leh.
Isku soo wada xooriyoo, Munasabadii xuskii sanadgurada 30 aad ee JWXO ee lagu qabtay gobolka Nebraska ayaa ahay mid ay aad ugu diirsdeen shacabka Somalida Ogadenyaa ee jecel inay mar uun ku naaloodan xornimo taam ah.